Dzidzo Sisitimu muGerman uye Kushanda kweGerman Education System | Kudzidzira chiGerman, Kudzidza chiGerman
musha » Germany Portal » Dzidzo Sisitimu muGerman uye Kushanda kweGerman Education System
1 Kushanda kweGerman Education System
2 Gadziriro yefundo yeGerman yakarongedzwa sei?
3 Zvikoro kuGermany zvinobhadharwa here?
4 Ndiani anotarisira zvikoro kuGermany?
5 Ndedzipi nyaya dzaisa gadziriro yegwaro redzidzo kuGermany?
Kushanda kweGerman Education System
Zvikoro zvinobhadharwa here? Nei zvichimanikidzwa kuenda kuchikoro? Heano maitiro ezvirongwa zveGerman dzidzo.
Kusiyana nedzimwe nyika uko dzidzo inomanikidzwa, vabereki havabvumidzwe kudzidzisa vana vavo pamba. Munyika ino, veruzhinji vane chisungo chekuenda kuchikoro chechikoro, icho chinoumba hwaro hwebasa rekudzidzisa. Vana vanowanzotanga chikoro vaine makore matanhatu uye vanopinda chikoro kweanopfuura makore mapfumbamwe.
Gadziriro yefundo yeGerman yakarongedzwa sei?
Vana vanotanga kuenda kuGrundschule kwemakore mana. Mugiredhi rechina, zvinosarudzwa nzira yekuenderera mberi nedzidzo yavo. Zvikoro zvinotevera chikoro chepuraimari; Yakakamurwa muzvikoro zvinonzi Hauptschule, Realschule, Gymnasium uye Gesamtschule.
Chikoro chepuraimari chinonzi Hauptschule chinopera nediploma mushure megiredhi repfumbamwe; Chikoro cheSekondari chinonzi Realschule chinodzidziswa diploma mushure megumi giredhi. Mushure mezvikoro izvi, vadzidzi vanogona kutanga kudzidzira basa kana kuenda kuchikoro. Mushure memakore gumi nemaviri neechigumi nematatu ezvikoro zvepamusoro zvinonzi Gymnasium, diploma rechikoro chepamusoro rinopihwa iro rinokupa kodzero yekufunda pakoreji.
Zvikoro kuGermany zvinobhadharwa here?
Zvikoro zveruzhinji zveGerman zvine huwandu hwedzidzo yemahara hazvibhadharwe uye zvinopihwa mari nemitero. Vanosvika 9% evadzidzi vanopinda zvikoro zvakazvimirira nemari.
Ndiani anotarisira zvikoro kuGermany?
MuGerman, zvikoro hazvina chimiro chepakati, dzidzo chinhu chemukati chematunhu. Chiremera chiri mumashumiro edzidzo egumi nematanhatu. Shanduko pakati pemakosi, zvirongwa zvechidzidzo, madiploma nemhando dzechikoro zvinogona kurongwa zvakasiyana mudunhu rega rega.
Ndedzipi nyaya dzaisa gadziriro yegwaro redzidzo kuGermany?
Dhijitari Shanduko: Zvikoro zvakawanda kuGerman zvinosangana nekushomeka kwevadzidzisi vanofarira internet nekukurumidza, tekinoroji uye nzira nyowani dzekudzidzisa. Izvi zvinotarisirwa kuchinja, nekuda kweDhijitari Pact yeHurumende uye nehurumende dzenyika, iyo inovavarira kupa zvikoro nehunyanzvi hwedigital tekinoroji.
KUFUNGA IZVI: Nzvimbo dzekushanyira kuGerman
Mukana Wakaenzana: Mune dzidzo, vana vese vanofanirwa kuve nemikana yakaenzana. Nekudaro, budiriro yedzidzo muGerman inonyanya kuvimba nekwavo magariro. Asi maitiro acho akanaka; kuenzana kwemukana kunowedzera. Kuongorora kweOECD's PISA Kudzidza pane kubudirira kwechikoro muna 2018 kunoratidza izvi.
TAGS: chirongwa chedzidzo mu germany
Re: Pfupiso yemakore angu mashanu German
Re: Musingagumi musangano